निजी स्कुलले अब कति शुल्क कसरी लिन पाउँछन्?
कृष्ण मल्ल बुटवल - बिहीबार, भदौ २५, २०७७
सरकारले विद्यालयहरूलाई ‘सिकाइ सहजीकरण’ को शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको छ।
‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ लाई परिमार्जित गरेर सरकारले सहजीकरणको शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको हो।
यससँगै निजी स्कुलले महिनौंदेखि माग गर्दै आएको अनलाइन कक्षासहितको सबै सहजीकरणको शिक्षण (ट्युसन) शुल्क लिन पाउनेछन्।
तर, विद्यालय नै नखुलेका कारण उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा भने शुल्क असुल्न पाउने छैनन्। त्यसका लागि स्थानीय तहले सुरपरीवेक्षण गर्नेछन्।
जस्तो कि, निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कसहित खेलकूद, प्राथमिक उपचार, कम्प्युटर, ल्याब, परीक्षा शुल्क, यातायातलगायत सबैजसो मासिक शुल्कमै जोडेका हुन्छन्।
अब लिन पाउने शुल्क भनेको उनीहरूले विद्यार्थीलाई कुन तरिकाबाट पढाएका छन् त्यहीअनुसार हुनेछ।
संविधानमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको हुँदा सामुदायिक स्कुलले भने उक्त शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने छैनन्।
गत जेठ १८ मा जारी भएको निर्देशिकालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परिमार्जित गरिएको छ।
निर्देशिकाको बुदा नं. ३० मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
यो भनेको स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको शुल्क लिन पाउने भन्नेमात्रै होइन।
त्यसका लागि स्कुलले सहजीकरण निर्देशिकाले तोकेका पाँचवटा विधिमा टेकेर शुल्क लिन पाउनेछन्।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा पहिलो सहजीकरणको विधिमा सबै किसिमका पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थी समूहका लागि प्रिन्ट सामग्रीका साथै घर र समुदायमा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरी सहजीकरण गर्ने प्रावधान छ।
यो भनेको पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले पुस्तक तथा अन्य पाठ्य सामग्री घरमै उपलब्ध गराएर पढाउने हो।
दोस्रो विकल्पका रूपमा रेडियो, एफम पहुँचमा रहेका बालबालिकाका लागि रेडियो कक्षा उल्लेख छ।
त्यसैगरी तेस्रो विकल्पका रूपमा टेलिभिजनको पहुँचमा रहेका विद्यार्थी समूहका लागि टेलिभजन कक्षा हो।
चौथो कम्प्युटर भएको तर इन्टरनेट सुविधा नभएका विद्यार्थी समूहका लागि अफलाइन सामग्री, जस्तै पेन ड्राइभ, सिडी, हार्डडिस्कमा सामग्री उपलब्ध गराउने हो।
र, पाँचौं विकल्पका रूपमा इन्टरनेट पहुँचमा भएका विद्यार्थी समूहका लागि संघ र प्रदेशका साथै विभिन्न संस्थाबाट निर्मित सामग्रीका साथै अनलाइन कक्षा रहेका छन्।
विद्यालयले विद्यार्थीलाई जुनसुकै तरिकाबाट सहजीकरण गरे पनि शुल्क लिन मिल्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए।
‘अनलाइनबाट पढाएको मात्रै शुल्क लिने भन्ने होइन,’ प्रवक्ता शर्माले आयोमेलसँग भने, ‘जुनसुकै सहजीकरणको शुल्क विद्यालयले लिनसक्छन्। तर, शुल्क लिनका लागि विद्यार्थीलाई सिकाइमा सहजीकरण गर्न र प्रस्तावित शुल्क स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत गर्न भने अनिवार्य हुन्छ।’
विद्यालयहरू वर्गीकरण भएको अवस्थामा छन्, विद्यालयको सहजीकरणमा फरक–फरक खालको उपस्थिति छ, त्यसैले स्कुलको वर्ग, कक्षा, तह, अवस्था, भूगोल र स्थानीयताअनुसार शुल्क फरक हुनसक्ने शर्माले बताए।
उनका अनुसार शुल्क लिन विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको निर्णय गराइ कक्षाअनुसार शुल्क प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले शुल्क स्वीकृत गरेपछि मात्रै स्कुलले शुल्क उठाउन पाउँछन्। कहिलेदेखि शुल्क उठाउने र शिक्षण शुल्कको कति प्रतिशत लिन पाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहले निर्णय गर्ने छ।
स्कुल खोल्ने, नियमन गर्ने, बन्द गर्ने, शुल्क तोक्ने अधिकारी स्थानीय तहको भएको हुँदा मन्त्रालयले शुल्क तोक्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको उनले बताए।
५० प्रतिशतमात्रै शुल्क तिर्छौं : अभिभावक संघ
नेपाल अभिभावक महासंघका केन्द्रीय संयोजक सुप्रभात भण्डारीले शुल्क लिँदा संक्रमणकालीन अवस्थाको ख्याल गरिनुपर्ने बताएका छन्।
‘कतिपय स्कुलले शुल्क उठाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संक्रमणकालीन अवस्थामा शिक्षण शुल्कको ५० प्रतिशतमात्रै शुल्क तिर्न अभिभावकहरू तयार छन्।’
यो समयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभएर पठनपाठन हुने हुँदा पूरा शुल्क उठाउँदा अन्याय हुने उनले बताए।
‘यो बेला स्कुलहरूले पनि लागत बेहोर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘हामी ५० प्रतिशत शुल्क बेहोर्न तयार छौं।’